Ukulungiswa kweempazamo kubhaliso lwe-iCloud olubhaliswe kule veki | Ndisuka mac
Ukulungiswa kweempazamo kwi-iCloud ebhalwe kule veki
Kule veki iphelileyo bekukho iimpazamo kwiinkonzo zobhaliso ze-iCloud. Ngokukodwa ukusukela ekuqaleni kweveki, abanye abasebenzisi beenkonzo ze-50 Gb ze-0,99 euro / ngenyanga, kunye ne-200 Gb ye-2,99 euro / ngenyanga, bafumana imiyalezo ebalumkisa ukuba inkonzo yabo imisiwe. Abanye abasebenzisi bazisiwe ngokurhoxiswa nge-imeyile. Aba bathengi beApple bakhawuleza ukunxibelelana neApple kuba namhlanje sigcina ulwazi oluninzi kwiinkonzo zefu. Namhlanje iingxaki zisonjululwe, Kwaye uApple unxibelelane nabasebenzisi nge-imeyile enika ingxelo ngesigameko kwaye ecela uxolo.
Zombini iinkcukacha zokucinywa kweakhawunti, kunye nee-imeyile ngokunxulumene nokuvalwa kwenkonzo yabasebenzisi abachaphazelekayo, ulwazi oluchanekileyo kwinxalenye yeApple, njengoko kuchaziwe kwii-imeyile ezithunyelweyo:
Molo (igama lomthengi),
Kutshanje ufumene i-imeyile ngempazamo echaza ukuba icebo lakho lokugcina i-iCloud lurhoxisiwe. Isicwangciso sakho sokugcinwa kwe-IC ye-___ GB ayichaphazeleki kwaye iya kuqhubeka nokuzihlaziya ngokuzenzekelayo.
Siyaxolisa ngayo nayiphi na inkxamleko ebangelwe yile. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nathi.
Ngoko ke, Inkampani iqinisekisa ukubuyiswa kwenkqubo kwaye iqinisekisa ukuba iya kuhlaziywa ngaphandle kwengxaki..
Nangona kunjalo, asiyazi imvelaphi yengxaki. Le yingxaki enkulu kwinkampani, njengoko abasebenzisi abaninzi benolwazi olubuthathaka kwinqanaba lomntu, njengeefoto okanye amaxwebhu abaluleke kakhulu. Ke ngoko, sihlala sicebisa ukuba sinolwazi kwilifu lokuzivumelanisa phakathi kwezixhobo, kodwa Kubaluleke kakhulu ukuba olu lwazi lube kugcino olusemzimbeni ukunqanda iingxaki ezinokubakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukulungiswa kweempazamo kwi-iCloud ebhalwe kule veki
IMacOS 10.12.5 Beta, iWozniak incokola ngeApple, umdlalo wokuqala weStarcraft, kunye nokuninzi. Eyona veki igqwesileyo eSoydeMac